घाँस काट्नमात्रै पाँचजनालाई रोजगारी « Tuwachung.com
२. ‘सम्धीसाप तपाईंलाई जीवनभरि कहिल्यै नेता मान्दिनँ’
३. गृहसचिव न्यौपानेसहित सुरक्षा प्रमुखहरू हलेसीमा
४. सोताङ र पिल्मोङ ‘कुलुङकरण’मा : पुत्ला जलाउन नपरोस्
५. श्रवण मुकारुङले शान्तिराम राईलाई भने– तपाईंको स्वर मन परेन नगाउनूस्
७. साहित्य पनि कलात्मक राजनीति
८. पाँच सय रुपैयाँको नोटमा भावुक प्रेमपत्र
९. क्यासिनोलाई मन्दिर ठान्ने चिनियाँ नागरिक केश फुलिन्जेल जुवा खेल्ने
११. मोटरसाइकलमा भैंसीलाई घाँस
१२. नर्स बन्ने सपना हिरोइन बनेर पूरा
घाँस काट्नमात्रै पाँचजनालाई रोजगारी
देवी सापकोटा	२०७६ चैत्र ८, १९:०५
गैंडाकोट–१२ भेडाबारीको पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाटै देखिने घाँस फार्मका सञ्चालक विष्णु भट्ट बिहान उठेदेखि साँझसम्मै घाँसखेतमै भेटिन्छन् । झट्ट हेर्दा उखुबारीजस्तै देखिने सुपर नेपियर जातको घाँस काट्ने समय भएको छ । टुप्पोको भाग घाँसका लागि प्रयोग हुन्छ भने ऊखुजस्ता देखिने हाँगाहरू अर्को बिरुवा बनाउन तयार गरिन्छ । आवश्यक पर्ने किसानले फार्ममा आएर लैजाने गर्छन् । घाँस लगाउने तरिका भट्टले फार्ममै भेटेर बताउँछन् । टाढाका किसानलाई भने उनले मोबाइलबाटै जानकारी दिने गर्छन् । घाँस भन्नासाथ पाखोबारी, कान्लामा लगाइने भन्ने बुझिन्छ । तर, उनले लगाएको घाँसबारी छिचोल्नै घन्टौं लाग्छ । घाँस काट्न ६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जस्तोसुकै हावापानीमा पनि राम्रोसँग बढ्ने हुँदा किसानको रोजाइमा यो घाँस परेको छ । पशुलाई चाहिने पौष्टिक तत्व प्रशस्त पाइने हुँदा उनले लगाएको घाँस धेरैको छनोटमा छ ।
श्री स्वस्थानी घाँस स्रोत केन्द्र तथा बाख्रा फार्ममा अहिले दैनिक २० हजार रुपियाँभन्दा बढीको घाँस र बीउको बिक्री हुने गरेको छ । विष्णुको घाँस फार्मको कथा धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । केही महिनाअघि नगरपालिकाले उत्पादित घाँसको बीउसमेत खरिद गरेर अन्य किसानलाई बाँड्यो । ‘अहिले देश–विदेशबाट दैनिक फार्म अवलोकन तथा अध्ययनका लागि आउँछन्,’ उनले सुनाए, ‘केही महिना पहिले भारत, चीन, जापान, इटालीलगायत देशका कृषि वैज्ञानिक पनि अवलोकनका लागि आएका थिए ।’
वर्ष दिनअघिबाट सुरु फार्ममा २० बढी प्रजातिका घाँस छन् । फार्मबाटै प्रतिकिलो नौ रुपियाँका दरले हरियो घाँस बिक्री हुन्छ । आठ बिघा क्षेत्रफलमा सुरु घाँस खेतीमा घाँससँगै अन्य बिरुवा पनि छन् । कतै फूल त कतै गिठ्ठाका लहरा देखिन्छन् । घाँस खेतीकै बीचमा गिठ्ठा रोप्नुका कारणबारे उनले सुनाए, ‘अहिले हरेक तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढेको छ । हाम्रा पुराना स्वादका तरकारी लोप हुने अवस्थामा छन् । केही होटलमा गिठ्ठाको परिकारको खोजी भएको थाहा पाएपछि किन मैले सुरु नगर्ने भनेर सुरु गरेको हुँ ।’
असहज परिस्थितिमा समेत किसानले पशुपालन गर्दै आएका छन् । तर दाना, घाँसलगायतका पशुका लागि आहार जुटाउन अझ कठिन छ । पशुले खाने दानाको मूल्य बढ्दो छ । महँगो दाना त्यसमा पनि भनेको समयमा किन्न पाइँदैन । चौपायाको चरन क्षेत्र मासिँदै जाँदा हरियो घाँसमा कमी आएको छ ।
समस्याका बीचमा पनि पशुपालन गरिरहेका किसान देखेपछि पशुका लागि उपयुक्त आहारबारे उनमा जिज्ञासा बढ्दै गयो । पशुलाई चाहिने पोषक तत्व भएका घाँसबारे खोजी बढ्न थाल्यो । चौपायाका लागि सम्पूर्ण आहार पुग्ने किसिमको घाँस उत्पादन गर्न सके राम्रो हुन्छ र त्यसले आमकिसानलाई फाइदा पुग्छ भन्ने भएपछि फार्म सुरु गर्ने निर्णयमा पुगे ।
३६ वर्षीय युवा घाँसको विस्तार गर्न तीव्र रूपमा लागेका छन् । घाँसलाई देशभरि विस्तार गर्ने सके पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ । उनले ३० लाख खर्च गरेर सुरु गरेको घाँस अभियान अहिले देशभर फैलिँदै छ ।
खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो छ । मासुजन्य उत्पादनमा पनि छिमेकी देशसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । घाँस सहजै पाउन सकियो भने त पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढ्न सक्छ । त्यसो हुँदा मासु र दूधका लागि भारतसँगको निर्भरतामा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
छोटो समयमै प्रतिफल दिन सक्ने पशुलाई आवश्यक पर्ने पोषण भएको घाँस उत्पादन गर्न सकियो भने माग बढ्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । पशुका लागि चाहिले आहार जुटाउन भरपर्दो विकल्पका रूपमा उनले यो खेती रोजे ।
खेतीबारीका डिल, थोरै खाली जग्गामा पनि यस्ता घाँस लगाउन सकिने भएर नै यस्ता घाँसको माग बढेको उनी बताउँछन् । सुरुवातका केही महिना दुई बिघा क्षेत्रफलमा मात्रै घाँस लगाए । देशभरिबाटै घाँसको माग बढ्न थालेपछि थप जमिन भाडामा लिएर घाँस विस्तार गरे ।
जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्र र हावापानीमा पनि यस प्रजातिको घाँस हुर्कन्छ । रोपेको दोस्रो महिनाबाट घाँस काट्न सकिन्छ । सुपर नेपियर जातको घाँसका हाँगा रोपिएको ६ महिनापछि अर्को बिरुवा बनाउन तयार हुन्छ । एउटा हाँगोलाई पाँच टुक्रा बनाइन्छ । ती टुक्रालाई बोरामा भरेर माग भएका स्थानमा पठाउँदै आएको उनले बताए । प्रतिबोरा दुई हजार पाँच सयका दरले फार्मबाटै बिक्री हुँदै आएको छ । पशुका लागि मात्र होइन, पक्षीका लागि पनि लाभदायक हुने घाँस उनले लगाएका छन् ।
मेसिनबाट कोठामै उत्पादन गर्न सकिने हरियो घाँस
विश्वका अधिकांश देशमा आधुनिक प्रविधिबाट ठुल्ठूला कृषि क्रान्ति गरिएका छन् । विश्वको बढ्दो जनसंख्याले गर्दा
चोरदाउले कति हेर्छौ मलाई घरिघरी
नधकाई आफ्नै सम्झी मनका कुरा खोल सानु भाग्य कतै छिनिन्छ कि एक बचन बोल सानु
कुखुरो छ स्यालको चेला गजबको
आज घरकै आँगनमा छ मेला गजबको टाटे–पाङग्रे कुकुरको भेला गजबको एकै ठाउँ छन् हाँस्ने, रुने